ပဲပွုတျစားခွငျး၏_အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ သတိပွု ဆငျခွငျရမညျ့ အခကျြမြား – Shangyimm
ပဲပွုတျစားခွငျး၏_အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ သတိပွု ဆငျခွငျရမညျ့ အခကျြမြား
ပဲပြုတ်စားခြင်း၏_အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သတိပြု ဆင်ခြင်ရမည့် အချက်များ…..
ဆေးသိပ္ပံနည်းအရ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ရာ စားတော်ပဲပြုတ်ထဲတွင် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်တို့ အလုံအလောက် ပါရှိပြီး၊ ဘေးဖြစ်စေတတ်သော ကိုလက်စထရောလုံးဝမပါရှိသည့်အတွက် နေ့စဉ်စားသုံးပေးသင့်သောအာဟာရဖြစ်ကြောင်း USDA (ခေါ်) အမျိုးသားအာဟာရပြု စစ်တမ်းများနှင့်WHFoods တို့မှ အခိုင် အမာထောက်ခံထားကြပါသည်။….
1.ပဲပြုတ်ထဲတွင်အဆီဓာတ်နှင့်ကယ်လိုရီပါဝင်မှု မရှိသလောက်လွန်စွာနည်းပါးသော်လည်း၊ အာဟာရ ဓာတ်ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် ပုံမှန်ထိန်း သိမ်းလိုသူများ မှီဝဲစားသုံးသင့်ပါသည်။
2. ပဲပြုတ်ထဲတွင်ချေဖျက်လွယ်သောအမျှင်ဓာတ် အမြောက်အများပါရှိ၏။ ထိုအမျှင်ဓာတ်များသည် အစာခြေ လမ်းကြောင်းအတွင်း အစာကိုလှုပ်ရှားရွေ့လျားစေသည့် အလိုအလျောက်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကိုအားပေး သဖြင့်ဝမ်းမချုပ်စေပါဘူး။
4. စားတော်ပဲသည် သံဓာတ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သွေးနီဥဆဲလ်များ ကို ကောင်းစွာ တည်ဆောက်စေကာ၊ သွေးအားနည်းရောဂါနှင့် အလွန်အမင်းမောပမ်းခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေပါသည်။ထို့ပြင် အဆုတ်ထဲရှိ အောင်စီဂျင်ကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေး၏။
5. စားတော်ပဲထဲတွင် lutein နှင့် carotenoidတို့ပါရှိသဖြင့်၊ ပဲပြုတ်ကို ပုံမှန်စားသုံးသောသူများသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့် လာခြင်းကြောင့် မျက်စေ့ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်မျက်စေ့ရေတိမ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ ကို လျော့ချပေးနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက အကြံပြုထားကြပါသည်။
6. စားတော်ပဲပြုတ် တစ်ခွက်စာပမာဏထဲတွင် ဗီတာမင်ကေ ၄၄% ပါရှိသည့်ပြင်၊ ဗီတာမင်ဘီ လည်းပါရှိသဖြင့် အရိုးကိုကျန်းမာ သန်စွမ်းစေကာ၊ ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အရိုးကြွတ်ဆတ်ခြင်း မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်၏။ထို့ကြောင့် ကလေး/လူကြီး များသာမက၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများပါ ပဲပြုတ်ကို စားပေးသင့်ပါသည်။
7. သွေးထဲရှိသကြားပမာဏကိုပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သောခွန်အားများကို ထုတ် လုပ်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းရှိ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း စသည်ဖြင့် ကောင်း ကျိုးပြု ပါသည်။
8. Free radicals များသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ သွေးကြောနံရံများကို အနည်ကျပိတ်ဆို့စေကာ၊ သွေးကြောမများကို ပျက်စီးစေပြီး၊ အဆီပိတ်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်လေးဘက်နာရောဂါ များကို ဖြစ်စေ၏။ စားတော်ပဲထဲတွင် ပါရှိသော Flavonoids နှင့် phytonutrients များသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအဖြစ် စွမ်းဆောင်ပေးကာ၊ ထို Free radicals များကို တိုက်ထုတ် ပေးသဖြင့် အဆိုပါရောဂါများကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ဒါ့ပြင် သစ်ပင်ထဲတွင် ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရသည့် lectins ဓာတ်ပါရှိသဖြင့်၊ သွေးနီဥဆဲလ်များပျော်ဝင်စေကာ၊ သွေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
9. ဗီတာမင်ဘီဓာတ်ပေါင်းစုပါရှိကာ homocysteine ပမာဏကို လျော့ကျစေသဖြင့် နှလုံးရောဂါ အမျိုးမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် နှလုံးရောဂါနှင့်ပတ်သက်ဆက်စပ်လျက် ရှိသောလေဖြတ်ခြင်း တို့ကိုလဲမဖြစ်စေပါ။ထို့ကြောင့် တစ်ပတ်လျှင် အနဲဆုံးတစ်ကြိမ် စားပေး သင့်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက အကြံပြုထားကြပါသည်။
10. စားတော်ပဲထဲတွင် ဗီတာမင် အေ-ဘီ-စီ-အီး၊ omega-3 တို့ပါရှိသည့်ပြင်၊ ဇင့်သတ္တုဓာတ် အလုံအလောက်ပါရှိ၏။ ထိုဓာတ်ပေါင်း စုများသည် လေပြွန်ဖောင်းပွသည့်ရောဂါ၊ မှက်ခရုရောဂါ၊ အယ်လ် ဇိုင်မား (ခေါ်) ဦးနှောက်အကြိုဇရာရောဂါ တို့ကို ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါသည်။
11. စားတော်ပဲပြုတ်ထဲတွင် glycemic ဓာတ်ပါဝင်မှုနဲပါးပြီး၊ သွေးထဲရှိ သကြားပမာဏကို ထိန်းပေးနိုင်ြ ခင်းကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ သည်များအတွက် ပဲပြုတ်ဟာ အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ဖြစ်ပါသည်။
12. မက္ကစီကိုနိုင်ငံတွင် မကြာသေးခင်က လေ့လာစမ်းစစ်ချက်အရ၊ စားတော်ပဲထဲတွင် polyphenol ဓာတ်ပါရှိသဖြင့်၊ နေ့စဉ် စားတော်ပဲပြုတ် ၂-မီလီဂရမ်မျှ စားပေးရုံဖြင့် အဆာအိမ်ကင်ဆာကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုရပါသည်။
13. မဂ္ဂနီစီယမ် သတ္တူဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါရှိ၍၊ သွေးတိုးရောဂါကိုမဖြစ်စေပါ။
14. ဖောလိပ်ဓာတ်အရင်းအမြစ်စုဝေးရာ စားတော်ပဲပြုတ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စားပေးခြင်းဖြင့် မွေး ဖွားလာသော ကလေးငယ် များတွင် မွေးရာပါ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဝေ ဒနာများ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာနဲပါးစေပါသည်။
15. အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးကိုင်မဖြစ်စေပါ။
စားတော်ပဲထဲတွင် သဘာဝအလျောက်ပါရှိသော purines ဓာတ်က ဂေါက်ရောဂါ သမားများနှင့် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာသည် များကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်၍၊ အထူးရှောင် ရှားသင့်ပါသည်။
အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝသော ပဲပြုတ် ကို ဈေးဈေးပေါပေါ နှင့် အလွယ်တကူရရှိနိုင်သဖြင့်၊ နိုင်ငံတိုင်းတွင် “a poor man’s meat (ဝါ) ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများအတွက် အသားဟင်းလျာ” ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြ ပါသည်။
ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များကတော့ “powerfood” ဟု ခေါ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ လက်တကမ်းတွင် အလွယ်တကူ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရရှိနိုင်သော “စားတော်ပဲပြုတ်” လေးများကို နေ့စဉ် သုံးအစားအစာအဖြစ် စားသုံးသင့်ပါကြောင်း။
ပဲပွုတျစားခွငျး၏_အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ သတိပွု ဆငျခွငျရမညျ့ အခကျြမြား…..
ဆေးသိပ်ပံနညျးအရဓာတျခှဲစမျးသပျကွညျ့ရာ စားတျောပဲပွုတျထဲတှငျ လူသားတို့ကနျြးမာရေးကိုအထောကျအကူဖွဈစသေော ဗီတာမငျနှငျ့သတ်တုဓာတျ တို့အလုံအလောကျ ပါရှိပွီး၊ ဘေးဖွဈစတေတျ သော ကိုလကျစထရောလုံးဝမပါရှိသညျ့ အတှကျနစေ့ဉျစားသုံးပေးသငျ့သောအာဟာရဖွဈကွောငျး USDA (ချေါ) အမြိုးသားအာဟာရပွု စဈတမျးမြားနှငျ့WHFoods တို့မှ အခိုငျ အမာထောကျခံထားကွပါသညျ။….
1.ပဲပွုတျထဲတှငျအဆီဓာတျနှငျ့ကယျလိုရီပါဝငျမှု မရှိသလောကျလှနျစှာနညျးပါးသျောလညျး၊ အာဟာရ ဓာတျကွှယျဝသောကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာအလေးခြိနျ ပုံမှနျထိနျး သိမျးလိုသူမြား မှီဝဲစားသုံးသငျ့ပါသညျ။
2. ပဲပွုတျထဲတှငျခဖြေကျြလှယျသောအမြှငျဓာတျ အမွောကျအမြားပါရှိ၏။ ထိုအမြှငျဓာတျမြားသညျ အစာခွေ လမျးကွောငျးအတှငျး အစာကိုလှုပျရှားရှလြေ့ားစသေညျ့ အလိုအလြောကျကွှကျသားလှုပျရှားမှုကိုအားပေး သဖွငျ့ဝမျးမခြုပျစပေါဘူး။
3. စားတျောပဲပွုတျထဲတှငျ nicotinic အကျဆဈ ပါရှိသဖွငျ့၊ သှေးထဲရှိမကောငျးသော ကိုလကျစထရောကို လြော့ခပြေးနိုငျ၏။
4. စားတျောပဲသညျ သံဓာတျအရငျးအမွဈဖွဈခွငျးကွောငျ့ သှေးနီဥဆဲလျမြား ကို ကောငျးစှာ တညျဆောကျစကော၊ သှေးအားနညျးရောဂါနှငျ့ အလှနျအမငျးမောပမျးခွငျးတို့မှ ကာကှယျပေးနိုငျပွီး၊ ကိုယျခံစှမျးအား ကိုတိုးတကျမွငျ့မားလာစပေါသညျ။ထို့ပွငျ အဆုတျထဲရှိ အောငျစီဂငျြကိုခန်ဓာကိုယျအနှံ့ပို့ဆောငျပေး၏။
5. စားတျောပဲထဲတှငျ lutein နှငျ့ carotenoidတို့ပါရှိသဖွငျ့၊ ပဲပွုတျကို ပုံမှနျစားသုံးသောသူမြားသညျ အသကျအရှယျကွီးရငျ့ လာခွငျးကွောငျ့ မကျြစရေ့ောဂါအမြိုးမြိုးနှငျ့မကျြစရေ့တေိမျရောဂါ ဖွဈနိုငျခြေ အလားအလာ ကို လြော့ခပြေးနိုငျကွောငျး နိုငျငံတကာ ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားက အကွံပွုထားကွပါသညျ။
6. စားတျောပဲပွုတျ တဈခှကျစာပမာဏထဲတှငျ ဗီတာမငျကေ ၄၄% ပါရှိသညျ့ပွငျ၊ ဗီတာမငျဘီ လညျးပါရှိသဖွငျ့ အရိုးကိုကနျြးမာ သနျစှမျးစကော၊ ဟိုမုနျးအပွောငျးအလဲကွောငျ့ အရိုးကွှတျဆတျခွငျး မှလညျး ကာကှယျပေးနိုငျ၏။ထို့ကွောငျ့ ကလေး/လူကွီး မြားသာမက၊ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးမြားပါ ပဲပွုတျကို စားပေးသငျ့ပါသညျ။
7. သှေးထဲရှိသကွားပမာဏကိုပုံမှနျဖွဈစခွေငျး၊ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျသောခှနျအားမြားကို ထုတျ လုပျပေးခွငျး၊ ကိုယျတှငျးရှိ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကို တိုးတကျကောငျးမှနျစခွေငျး စသညျဖွငျ့ ကောငျး ကြိုးပွု ပါသညျ။
8. Free radicals မြားသညျ ခန်ဓာကိုယျထဲရှိ သှေးကွောနံရံမြားကို အနညျကပြိတျဆို့စေ ကာ၊ သှေးကွောမမြားကို ပကျြစီးစပွေီး၊ အဆီပိတျရောဂါ၊ လဖွေတျခွငျး၊ အဆဈရောငျလေးဘကျနာရောဂါ မြားကို ဖွဈစေ၏။ စားတျောပဲထဲတှငျ ပါရှိသော Flavonoids နှငျ့ phytonutrients မြားသညျ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးအဖွဈ စှမျးဆောငျပေးကာ၊ ထို Free radicals မြားကို တိုကျထုတျ ပေးသဖွငျ့ အဆိုပါရောဂါမြားကို မဖွဈစနေိုငျပါ။ ဒါ့ပွငျ သဈပငျထဲတှငျ ရှားရှားပါးပါးတှရေ့သညျ့ lectins ဓာတျပါရှိသဖွငျ့၊ သှေးနီဥဆဲလျမြားပြျောဝငျစကော၊ သှေးခဲခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါသညျ။
9. ဗီတာမငျဘီဓာတျပေါငျးစုပါရှိကာ homocysteine ပမာဏကို လြော့ကစြသေဖွငျ့ နှလုံးရောဂါ အမြိုးမြိုးကိုထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျပေးသညျ့အပွငျ နှလုံးရောဂါနှငျ့ပတျသကျဆကျစပျလကျြ ရှိသောလဖွေတျခွငျး တို့ကိုလဲမဖွဈစပေါ။ထို့ကွောငျ့ တဈပတျလြှငျ အနဲဆုံးတဈကွိမျ စားပေး သငျ့ကွောငျး ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားက အကွံပွုထားကွပါသညျ။
10. စားတျောပဲထဲတှငျ ဗီတာမငျ အေ-ဘီ-စီ-အီး၊ omega-3 တို့ပါရှိသညျ့ပွငျ၊ ဇငျ့သတ်တုဓာတျ အလုံအလောကျပါရှိ၏။ ထိုဓာတျပေါငျး စုမြားသညျ လပွှေနျဖောငျးပှသညျ့ရောဂါ၊ မှကျခရုရောဂါ၊ အယျလျ ဇိုငျမား (ချေါ) ဦးနှောကျအကွိုဇရာရောဂါ တို့ကို ကာကှယျပေး နိုငျပါသညျ။
11. စားတျောပဲပွုတျထဲတှငျ glycemic ဓာတျပါဝငျမှုနဲပါးပွီး၊ သှေးထဲရှိ သကွားပမာဏကို ထိနျးပေးနိုငျွ ခငျးကွောငျ့ ဆီးခြိုရောဂါ သညျမြားအတှကျ ပဲပွုတျဟာ အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျဖွဈပါသညျ။
12. မက်ကစီကိုနိုငျငံတှငျ မကွာသေးခငျက လလေ့ာစမျးစဈခကျြအရ၊ စားတျောပဲထဲတှငျ polyphenol ဓာတျပါရှိသဖွငျ့၊ နစေ့ဉျ စားတျောပဲပွုတျ ၂-မီလီဂရမျမြှ စားပေးရုံဖွငျ့ အဆာအိမျကငျဆာကို ကွိုတငျကာကှယျပေးနိုငျသညျဟုဆိုရပါသညျ။
13. မဂ်ဂနီစီယမျ သတ်တူဓာတျ ကွှယျဝစှာပါရှိ၍၊ သှေးတိုးရောဂါကိုမဖွဈစပေါ။
14. ဖောလိပျဓာတျအရငျးအမွဈစုဝေးရာ စားတျောပဲပွုတျကို ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား စားပေးခွငျးဖွငျ့ မှေး ဖှားလာသော ကလေးငယျ မြားတှငျ မှေးရာပါ ဦးနှောကျနှငျ့အာရုံကွောဝေ ဒနာမြား ဖွဈနိုငျခြေ အလားအလာနဲပါးစပေါသညျ။
စားတျောပဲထဲတှငျ သဘာဝအလြောကျပါရှိသော purines ဓာတျက ဂေါကျရောဂါ သမားမြားနှငျ့ ကြောကျကပျဝဒေနာသညျ မြားကို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးဖွဈစနေိုငျ၍၊ အထူးရှောငျ ရှားသငျ့ပါသညျ။
အာဟာရဓာတျ ကွှယျဝသော ပဲပွုတျ ကို စြေးစြေးပေါပေါ နှငျ့ အလှယျတကူရရှိနိုငျသဖွငျ့၊ နိုငျငံတိုငျးတှငျ “a poor man’s meat (ဝါ) ဆငျးရဲခြို့တဲ့သူမြားအတှကျ အသားဟငျးလြာ” ဟု တငျစားချေါဝျေါလရှေိ့ကွ ပါသညျ။
ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျမြားကတော့ “powerfood” ဟု ချေါကွ၏။ ထို့ကွောငျ့ မိမိတို့ လကျတကမျးတှငျ အလှယျတကူ စြေးနှုနျးခြိုသာစှာ ရရှိနိုငျသော “စားတျောပဲပွုတျ” လေးမြားကို နစေ့ဉျ သုံးအစားအစာအဖွဈ စားသုံးသငျ့ပါကွောငျး။